လှပခြောမောပီး အလှူအတနျးရကျရောမှုကွောငျ့ ခြီးကြူးခံနရေတဲ့ ဆရာဝနျမလေး
Homenewsလှပခြောမောပီး အလှူအတနျးရကျရောမှုကွောငျ့ ခြီးကြူးခံနရေတဲ့ ဆရာဝနျမလေး
H August 24, 2020
အလှူအတနျး ရကျရောသလို ခြောမောလှပမှုကွောငျ့ ခြီးကြူးခံ နရေတဲ့ ဆရာဝနျမလေး တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ တကယျ့ကို ရှေးဆုတောငျးမြား ကောငျးခဲ့သူလို့ ဆိုခငျြလညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။ ပိုကျဆံလညျး ခမျြးသာသလို ရုပျရညျကလညျး သနျ့ပွနျ့ခြောမောလှပတဲ့ မွနျမာ အမြိုးသမီးလေးတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
ရှေးဆုတောငျးမြား ကောငျးခဲ့လသေလား…??? မန်တလေး၌ ၊သံဃာအပါး ။ တဈသောငျးနှဈသောငျး ၊သုံးသောငျး တို့ကို ။ သုံးကွိမျသုံးခါ ၊ဆှမျးဆနျစိမျးတှေ ။လောငျးလှူတဲ့ ခါ၊အမွဲတမျးပဲ ။ဒေါကျတာမလေး ဆောငျးရူပါဝငျး ပါနပေါတယျ ၊ ရှေးဆုတောငျး မြား ကောငျးခဲ့လေ သလား ၊ ဝမျးသာပီတိ ဖွဈမိပါတယျ။
ယခုလိုမြိုး ဆှမျးလောငျး လှူရ ၊ မွတျပုညကွောငျ့ ။အိုခွငျးနာခွငျး ၊ သခွေငျးမရှိရာ မွတျနိဗ်ဗာနျ၏ ၊ အထောကျ အပံ့ ဖွဈပါစသေား ၊ ဖွဈစသေတညျး ရုပျဆငျးအင်ျဂါ ၊ ရုပျရညျဟာလညျး ။ဒိထကျမက ၊ လှပပါစေ တငျ့တယျပါစေ ၊ ခြောမောပါစေ လိုအငျဆန်ဒ ၊ တောငျးသောဆုတှေ အမွနျပွညျ့ဝ ၊ ပါစသေားလို့ စာရေးသူက ၊ ထပျဆငျ့ ကာဖွငျ့ ။
ပတ်ထနာပွု ၊ တောငျးဆုပွုရငျး မှတျတမျး ရေးထိုး ၊ တငျလိုကျပါပွီ … ” တကယျ့ကို ကုသိုလျကောငျးတဲ့ မွနျမာမလေး အတှကျ ဝမျးသာစကားလေး ဆိုခဲ့ပွီး အလှူတှအေတှကျ သာဓုချေါဆို ပေးခဲ့ကွပါနျော..
source - AshinZavana
လှပချောမောပီး အလှူအတန်းရက်ရောမှုကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ ဆရာဝန်မလေး
အလှူအတန်း ရက်ရောသလို ချောမောလှပမှုကြောင့် ချီးကျူးခံ နေရတဲ့ ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ရှေးဆုတောင်းများ ကောင်းခဲ့သူလို့ ဆိုချင်လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း ချမ်းသာသလို ရုပ်ရည်ကလည်း သန့်ပြန့်ချောမောလှပတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးဆုတောင်းများ ကောင်းခဲ့လေသလား…??? မန္တလေး၌ ၊သံဃာအပါး ။ တစ်သောင်းနှစ်သောင်း ၊သုံးသောင်း တို့ကို ။ သုံးကြိမ်သုံးခါ ၊ဆွမ်းဆန်စိမ်းတွေ ။လောင်းလှူတဲ့ ခါ၊အမြဲတမ်းပဲ ။ဒေါက်တာမလေး ဆောင်းရူပါဝင်း ပါနေပါတယ် ၊ ရှေးဆုတောင်း များ ကောင်းခဲ့လေ သလား ၊ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။
ယခုလိုမျိုး ဆွမ်းလောင်း လှူရ ၊ မြတ်ပုညကြောင့် ။အိုခြင်းနာခြင်း ၊ သေခြင်းမရှိရာ မြတ်နိဗ္ဗာန်၏ ၊ အထောက် အပံ့ ဖြစ်ပါစေသား ၊ ဖြစ်စေသတည်း ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ ၊ ရုပ်ရည်ဟာလည်း ။ဒိထက်မက ၊ လှပပါစေ တင့်တယ်ပါစေ ၊ ချောမောပါစေ လိုအင်ဆန္ဒ ၊ တောင်းသောဆုတွေ အမြန်ပြည့်ဝ ၊ ပါစေသားလို့ စာရေးသူက ၊ ထပ်ဆင့် ကာဖြင့် ။
ပတ္ထနာပြု ၊ တောင်းဆုပြုရင်း မှတ်တမ်း ရေးထိုး ၊ တင်လိုက်ပါပြီ … ” တကယ့်ကို ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ မြန်မာမလေး အတွက် ဝမ်းသာစကားလေး ဆိုခဲ့ပြီး အလှူတွေအတွက် သာဓုခေါ်ဆို ပေးခဲ့ကြပါနော်..